Usuku My Pet » Ukuphola Etiquette
Omunye wabangane bami besilisa wangitshela ukuthi naye wake yango intombazane owabonakala udakiwe ngosuku lokuqala futhi wabe ihlanze lonke kwakhe! Nakuba sabonga never ngiye ukuthi ngiyaqiniseka sonke kwadingeka izinsuku ababe nje plain awful, lapho umuntu wenza into ngokuphelele asifaneleki futhi wena nje babefisa umhlabathi ngivule ukugwinya wena lonke. Futhi mina am pretty isiqiniseko sonke sabhekana fair yokumiswa ngomzuzu wokugcina ngisho mhlawumbe kokuba wasukuma. Plus konke sike wezwa izindaba horror mayelana nezinsuku zokuqala okungahambi kahle. Ngakho konakelephi nalezi zimo futhi kungashiwo kanjani kugwenywe. It konke ehla amazwi amabili amancane 'dating nenhlonipho'.
Kuyini dating nenhlonipho? Well ngicabanga ngakho njengoba umkhombandlela engashiwongo evumela isipiliyoni dating ukuya ngokushelela futhi sijabulise more kokubili abantu abathintekayo. Yebo asisoze ukulawula lokho omunye umuntu owenza, ukuze singakwazi kuphela akhethe ukuba nomthwalo wemfanelo ekuziphatheni kwethu, futhi ngikholwa ukuthi uma singazi ukhetha ukwelapha omunye umuntu kahle nodumo dating nenhlonipho ke siyoba nakho okuningi bujabulisa kakhulu futhi ukulawuleka of nithandana ngokwethu. Plus kokuba ikhodi yokuziphatha ngokwethu kungasisiza ukuba sihlale ephephile.
Yabhalwa etiquette kungahlanganisa izinto like lapho ukubiza, kaningi kangakanani Isigijimi nomunye, ukuthi uphendule zonke umyalezo and phone call, Timings kanye Ukufika ngemva kwesikhathi for dates, lokho ukugqoka, ukuthi uxoxa ngani ngosuku lwakho, lapho bese siyalwa, kodwa okubaluleke ophatha ngayo omunye umuntu futhi kanjani wena balindele ukuphathwa. Njengoba ubona ihlanganisa impela ezahlukene izici ngakho kungaba kancane obuqand futhi udideke. Plus uzothola ukuthi abantu babe zonke izinhlobo imibono ehlukene ngalokho futhi akuyona nokuziphatha okwamukelekayo lapho kuziwa endabeni yokuqomisana, futhi kanjalo into engcono kakhulu ukudala isethi yakho siqu iziqondiso ezisebenza kuwe, bese unamathela kuzo. Uma empeleni siphume zaphetha omunye umuntu ongakwenza at share esithile iziqondiso zakho nabo uma ukhetha kanjalo, futhi uxoxe ukuze aqiniseke wena okujabulisayo ngokuvumelana nendlela ukuphola omunye nomunye angabacwasi. Lokhu kuhilela ukwethembeka inani kanye nezinga elithile ukuvuthwa kusukela kokubili abantu. Ngikholelwa ukuthi uma abantu benza lokhu kakhulu ngokuvamile usizi kwakuyoba kungagwenywa.
Ngokuyinhloko noma, kokubona dating etiquette ukuphi. Uma siziphathe ngendlela esizizwa ezinhle mayelana siqala ukuba igunyaze thina nokuzihlonipha kanye ukuzethemba kwethu akhulise.
Ngokwesibonelo ungase unqume ukuthi inhlonipho ukuvumela umuntu oye yango once nje nazi uma Ngeke ababone, noma ungase unqume ukuthi lokhu akudingekile. Uma owesifazane ungase ukhethe ukuthi ngeke ocansini ngosuku lokuqala ngoba evumelana nawe kungcono ukulinda uze uzazi kangcono lowo muntu. Noma ungase ube nemizwa eqinile kakhulu mayelana not kokuba Zaqhubeka zilindile ngezinsuku noma mayelana imiyalezo ebuyiselwa. Lezi sonke ukuwa ngaphansi 'dating nenhlonipho'.
Nazi ezinye iziqondiso pretty standard ukuthi abantu abaningi angakhetha ukulandela njengengxenye dating yokuziphatha:
Yiba isikhathi dates
Ungami umuntu up ngomzuzu wokugcina
Musa ungadakwa ngempela ngosuku lokuqala
Musa ukuchitha ubusuku bonke ukhuluma ex yakho (ukuzamula)
Gqoka into efanele for the date uya kwi
Musa ngokuzenzakalelayo alindele sex ngosuku lokuqala
Empeleni abantu abaningi Babemane shayela imikhuba emihle ngenhla. Kodwa abanye butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi okuncane dating yokuziphatha kungaba more of a endaweni grey. Ngakho thatha isikhathi bacabange endaweni ngayinye ukuphola bese unquma imithetho yakho kanye nemihlahlandlela ngayinye. Ungase wenze isiqondiso sokuthi ngeke date amadoda ababa wena up ngomzuzu wokugcina, noma ukuthi ungathandi date abesifazane abenza sekwephuzile kakhulu. Ungase unqume ukuba bangagqoki iziketi mini ngosuku uma ungowesifazane ngoba ufisa ukunikeza more ukucabanga classy. Lezi ziqondiso kuyoba njengoba esiyingqayizivele njengoba wena kanye into ebalulekile iwukuba athole esicacile yini ukhululekile kuwe futhi yini engemukeleki nawe ngabanye.
Ngakho kanjani uyiphatha lapho umuntu enza into wena ungathandi? Yini oyenzayo uma umuntu ephula elilodwa imithetho yakho? Njengoba kushiwo ngaphambili asikwazi ukulawula indlela omunye umuntu aziphatha futhi asifuni ukuba. Ngakho kuyinto phansi lokho uzimisele ukwamukela futhi lapho uyobe umngcele. Ngokwesibonelo, uma omunye iziqondiso zakho wukuthi ungafuni ukuba igcinwe elinde usuku, futhi une umuntu sekwephuzile, iphuzu lakho wokuqala ucingo ukuze ubatshele indlela ozizwa ngayo lokhu. Ungenza lokhu non sisole, ngendlela esingagwegwesi ngokumane ukwabelana indlela ozizwa nokuthi akuyona into ofuna in a ubuhlobo dating. Nokho kuthiwani uma ngokuphindaphindiwe ukuwela line yakho? Well uzodinga ukunquma ukuthi ngokuqinile ukuthi line ukuphi. Uma ngempela ekucasula bese awukwazi ukubekezelela ukuziphatha ke lowo muntu umane ngeke kube okwaziyo okuhle kuwe. Emva owabe uzizwa kanjani uma eqhubeka kuwo kuyofakazela kudingeka ngikudedele ngenjabulo futhi ubuyekeze isiqondiso yakho ngokwakho, noma uzodinga ukubadedela. Lena indlela wena ubethembe wena kanye kwemingcele yakho siqu.
Phawula ukuthi lo main ingxenye, Kulesi sihloko engiye okukhulunywa 'iziqondiso' kunokuba 'imithetho'. Lokhu kungenxa yokuthi Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuba ube ezinye eguquguqukayo kanye wena ngokoMthetho ukuzama futhi ebona lokho uzizwa OK kuwe futhi yini nakanjani NOT okwamukelekayo. Njengoba ukhula futhi ushintshe njengoba umuntu futhi kanjalo izikhwepha imibono yenu ngezothando. Njalo kube nezimo, Nokho uma nenza okulungile wena nganoma yisiphi isikhathi I basikisela ukuba nginamathele imingcele yakho siqu dating nenhlonipho. Uma seqa imihlahlandlela yethu siqu njalo kuza emuva ukuluma nathi.